Marka 12: 1-44
Toriteny na fanazavàna - "La place de la Parole de Dieu dans ma vie (suite)" "
Toriteny na fanazavàna - "Tu aimeras ton Dieu et ton prochain" "
Marka 11 Marka 12 Marka 13
Ary niteny taminy Izy ka nanao fanoharana hoe: Nisy lehilahy anankiray nanao tanimboaloboka ka namefy azy manodidina sy nihady famiazana ary nanao tilikambo, ka nahofany tamin'olona mpiasa tany izany, dia lasa nankany an-tany hafa izy.
Ary nony tonga ny fotoana, dia naniraka mpanompo anankiray izy hankany amin'ny mpiasa tany handray amin'ny vokatry ny tanimboaloboka.
Ary mbola nanana anankiray izy, dia ny zanani-lahy malalany, ka nony farany dia naniraka azy hankany aminy izy ka nanao hoe: Hanaja ny zanako izy.
Ary rehefa nisambotra azy izy, dia nahafaty azy sy namoaka azy teo ivelan'ny tanimboaloboka.
Koa ahoana no hataon'ny tompon'ny tanimboaloboka amin'izany! Ho avy izy, dia handringana ny mpiasa tany, ka homeny olon-kafa ny tanimboaloboka.
Ary tsy mbola novakinareo va izao Soratra Masina izao:"Ny vato izay nolavin'ny mpanao trano, dia izy no efa natao fehizoro;
Avy tamin'i Jehovah izao ka mahagaga eo imasontsika?"(Sal.118.22.23).
Ary rehefa tonga izy ireo, dia nanao taminy hoe:Mpampianatra ô, fantatray fa marina Hianao, ka tsy mampaninona Anao ny hevitry ny olona, fa tsy mba mizaha tavan'olona Hianao, fa mampianatra marina ny làlan'Andriamanitra. Mety va ny mandoa vola hetra ho an'i Kaisara, sa tsia?
Handoa va izahay, sa tsy handoa? Fa Izy nahalala ny fihatsarambelatsihiny, ka dia nanao taminy hoe: Nahoana no maka fanahy Ahy hianareo? Itondray denaria ety amiko hizahako azy.
Mpampianatra ô, Mosesy nanoratra ho antsika hoe: Raha misy manan-drahalahy maty momba, ka mbola velona ny vadin'ny maty, dia aoka ny rahalahiny hampakatra azy hiteraka hamelo-maso ny rahalahiny (Deo.25.5).
Koa amin'ny fitsanganan'ny maty, ho vadin' iza moa ravehivavy, satria efa samy nanambady azy avokoa izy fito mirahalahy?
Ka ny amin'ny hananganana ny maty, tsy mbola novakinareo va ny eo amin'ny bokin'i Mosesy, eo amin'ilay teny milaza ny Voaroy, dia ny nanaovan'Andriamanitra taminy hoe: Izaho no Andriamanitr'i Abrahama sy Andriamanitr' Isaka ary Andriamanitr'i Jakoba? (Eks.3.6).
Tsy Andriamanitry ny maty Izy, fa an'ny velona; koa diso indrindra hianareo.
Dia nanatona an'i Jesosy ny mpanora-dalàna anankiray, izay efa nahare ny niadiany hevitra tamin'ny Sadoseo ka nahalala fa namaly azy tsara Izy. Dia nanontany Azy hoe: Ny didy manao ahoana no voalohany amin'izy rehetra?
Ary Jesosy namaly hoe: Ny voalohany dia izao: "Mihainoa, ry Isiraely: Jehovah Andriamanitra iray ihany;
koa tiava an'i Jehovah Andriamanitrao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra sy ny sainao rehetra ary ny herinao rehetra"(Deo. 6.4.5)
Ary ny faharoa dia izao: Tiava ny namanao tahaka ny tenanao (Lev.19.18 ) Tsy misy didy hafa lehibe noho ireo.
Ary raha hitan'i Jesosy fa namaly tamim-pahendrena izy, dia hoy Izy taminy: Tsy lavitra ny fanjakan'Andriamanitra hianao. Ary tsy nisy sahy nanontany Azy intsony.
Kanefa ny tenan'i Davida dia nampilazain'ny Fanahy Masina hoe: Jehovah nilaza tamin'ny Tompoko hoe: Mipetraha eo an-tànako ankavanana ambara-panaoko ny fahavalonao ho fitoeran-tongotrao(Sal.110.1)
Ny tenan'i Davida manao Azy hoe:Tompoko, koa ahoana no maha-Zanany Azy? Ary ny vahoaka betsaka nihaino Azy tamin'ny hafaliana.
Ary hoy Izy tamin'ny fampianarany: Mitandrema ny amin'ny mpanora-dalàna, izay mazoto mandehandeha miakanjo akanjo lava sy te-hoharahabain'olona eny an-tsena,
Ary raha nipetraka tandrifin'ny fandatsahan-drakitra Jesosy, dia nijery ny fandatsaky ny vahoaka vola tao Izy; ary maro ny mpanan-karena nandatsaka be tao.
Fa nisy mpitondratena malahelo anankiray kosa tonga teo, ka nandatsaka faratsakelyroa ankevitry ny variroaventy avy.
Ary Jesosy niantso ny mpianany hanatona Azy ka nanao taminy hoe: Lazaiko aminareo marina tokoa fa io mpitondratena malahelo io no efa nandatsaka be noho izay rehetra nandatsaka tao amin'ny fandatsahan-drakitra.
Fa ireo rehetra ireo, dia tamin'ny haben'ny fananany no nandatsahany tao; fa izy kosa, tamin'ny alahelony no nandatsahany tao izay rehetra nananany, dia ny fivelomany rehetra.